यस्ता अभिभावकका छोराछोरी तनावमा – Chitwan Post
यस्ता अभिभावकका छोराछोरी तनावमा
तनाव एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक बोझ हो । मन सहज हुन चाहन्छ । मनको सहजतामा जे कुराले बाधा—अवरोध उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई नै सामान्यतया तनाव भनेर भनिन्छ । तनाव सबैमा हुन्छ । यो संसार, यी देखिएका सबै वस्तु, पशुप्राणी, मनुष्य सबैसबै तनावकै उत्पादन हुन् । धरतीका हरेक सिर्जनामा तनावको अहम् भूमिका हुन्छ । जीवनका लागि यस्तो प्रकारको सिर्जनात्मक तनाव नभई हुँदैन र हाम्रो मन पनि यस्तो तनावमा खुसी नै हुन्छ, रमाउँछ । तर, हामीले भन्ने गरेको र भोग्ने गरेको ‘तनाव’ भने यस्तो सिर्जनात्मक तनावभित्र पर्दैन ।
‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ भनेजस्तै जब यो सुन्दर संसार र यहाँका रचनाहरुको कारक बनेको तनाव चाहिनेभन्दा धेरै हुन्छ, मनले बोझ भएको महसुस गर्दछ, तब त्यो हामीले आजभोलि भन्ने गरेको र भोग्ने गरेको ‘तनाव’ बन्न पुग्दछ । त्यति नै बेला यो तनाव सिर्जनात्मक हुन छोडेर ध्वंसात्मक बन्न जान्छ ।
हरेक उमेर समूहका मानिसले विभिन्न कारणले तनाव महसुस गर्ने गर्दछन् । हाम्रा छोराछोरी पनि विभिन्न कारणले तनावमा रहने गरेका छन् । व्यक्ति तनावमुक्त हुन जरूरी छ । व्यर्थ तनावको बोझले सबै प्रकारका प्रगति र उन्नतिका बाटाहरु अवरूद्ध हुन पुग्दछन् । व्यक्तिभित्र विद्यमान सम्भावना पनि समाप्त भएर जाने खतरा हुन्छ । हामी अभिभावक हाम्रा सुन्दर भविष्य यी छोराछोरीमा कुनै पनि प्रकारको तनाव नहोस् र त्यसले उनीहरुभित्रको सम्भावनालाई क्षतविक्षत नगरोस् भनेर सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
हाम्रा छोराछोरी तनावमा हुने मुख्य कारण के–के हुन् त ? हाम्रा कारण पनि ती तनावमा परेका पो छन् कि ? आउनुस्, आज यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्ने प्रयास गरौँ । सामान्यतया बालबालिका आफ्नो तीव्रगतिमा बढ्दै गरेको शरीर र त्यसको विकासक्रम, पढाइलेखाइको बोझ, शरीरमा लागेको असाध्य रोग, प्रशस्त निद्राको अभाव, साथीभाइसितको झैझगडा, मोबाइल—इन्टरनेटलगायत प्रविधिको अतिप्रयोग, भद्दा र बोझिलो समयतालिका, पारिवारिक अवस्था, परीक्षा, माया नगर्ने शिक्षकशिक्षिका, नयाँ विद्यालयजस्ता विषयका कारण मानसिक तनावमा रहने गरेका अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
ब्राह्मणको मह¤व (महाभारत–चिन्तन)
मोटामोटीरुपमा हाम्रा छोराछोरीको मानसिक तनावमा पर्ने अवस्थालाई माथिका यी विभिन्न बुँदाहरुभित्र समेट्न सकिन्छ, तर हामी अभिभावकका कारण हाम्रै बालबालिकाले कसरी त्यो तनाव झेलिरहेका छन् त ? अब यतातिर एकछिन चिन्तन गरौँ ।
घर पहिलो पाठशाला हो र हामी अभिभावक प्रथम शिक्षक हौँ भन्ने सन्दर्भबारे हामीले धेरै चर्चा गरेका छौँ । जीवनको मह¤वपूर्ण र आधारभूत ज्ञान हामीले नै हाम्रा बाबुनानीलाई प्रदान गर्ने हो । उनीहरुको अधिकांश पहिचान घरकै कारण निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले, घर उनीहरुका लागि सबैभन्दा धेरै मह¤वपूर्ण छ ।
घर मह¤वपूर्ण हुनु भनेको अभिभावक मह¤वपूर्ण हुनु हो, बाबुआमा मह¤वपूर्ण हुनु हो । हाम्रा छोराछोरीको बाहिरको बोझ बिसाउने चौतारी नै हाम्रो घर हो । बाहिरका मानिस, साथीभाइ आदिका कारण उत्पन्न तनाव शान्त पार्ने घरमा नै हो । घरमा मातृस्नेहको शीतलता र पितृसंरक्षणको न्यानोपनको सुन्दर संयोजनमा सबै प्रकारका बाधा, विरोध, दुःख र तनावहरुको निराकरण सम्भव हुन्छ ।
घर र अभिभावक बालबालिकाका लागि त्यत्तिकै मह¤वपूर्ण भएका होइनन् । आमाको स्नेह र पिताको संरक्षण नहुने हो भने घरको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । छोराछोरीका लागि बाबुआमा त्यति मह¤वपूर्ण छन् । तर, हामी अभिभावक हुँदाहुँदै पनि हाम्रा बाबुनानीले पीडा व्यहोर्नु प¥यो अथवा तनाव महसुस गर्नुप¥यो भने के होला ? यो अझ विचारणीय प्रश्न हो । त्यसोभए सामान्यतया कस्ता अभिभावकका बालबालिका तनावमा बाँच्छन् त ? तलका बुँदाहरुमा चिन्तन गरौँ ।
१. अभिभावकको स्वास्थ्य
प्रत्येक सन्तान आफ्ना अभिभावकको स्वास्थ्य सुन्दर होस् भन्ने चाहन्छ । यदि बाबुआमालाई कुनै रोग लाग्यो भने, कहिलेकाहीँ दुर्घटना भयो भने वा कुनै त्यस्तो भवितव्य प¥यो भने छोराछोरी असाध्यै चिन्तित हुन्छन् । बाबुआमाप्रति उनीहरुको स्नेह र सम्मान अत्यन्त ठूलो हुन्छ । आशा र अपेक्षा पनि ठूलै हुन्छ । घरमा रूँदा फकाउनेदेखि लिएर सबै कुरा गरिदिने त्यस्ता बाबुआमा बिरामी हुँदा, सर्पले टोक्दा वा अन्य दुर्घटना हुँदा उनीहरुभित्रको मनोविज्ञानले एक्लो हुनुपर्ने अवस्थाप्रतिको चिन्तनतिर लिएर जाने हुनाले पनि बाबुनानीहरु दुःखी हुन्छन् ।
बाबुआमा बिरामी हुनासाथ घरमा कामको बोझ, केयर नपाउने अवस्था, विद्यालयको तयारी गरिदिने कोही नहुने स्थिति, खानपान, खाजानास्ता, किताबकापी र लुगाफाटोको व्यवस्था गरिदिने व्यक्तिको खाँचो आदिका कारणले पनि बालबालिकाहरु तनावमा पर्दछन् । पहिलो त उनीहरु सानै हुन्छन्, समस्याहरुसित लड्नुपर्दछ भन्ने चेत विकसित भएको पनि हुँदैन, दोस्रो आफूले बाबुआमाबाट पाइने सबै मायाप्रेम नपाउने अवस्था आउने भयो भन्ने चिन्ताले पनि ती त्यसरी तनावमा रहने गर्दछन् ।
त्यसैले, हामी अभिभावकको कर्तव्य भनेको आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सधैँ सचेत रहनु हो । स्वस्थ आहारविहार, स्वस्थ चिन्तन, स्वस्थ जीवनशैली, नियमित व्यायाम, ध्यानसाधनाको अभ्यासले हामी पनि स्वस्थ हुने र छोराछोरीलाई पनि स्वस्थ रहने संस्कार दिएर निरोग जीवन बाँच्न उत्प्रेरित गर्नु हो । उनीहरु हाम्रो स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर चिन्तित हुन नपरोस् ।
२. बाबुआमाको सम्बन्ध
हाम्रा छोराछोरी तनावमा रहने दोस्रो कारण भनेको हामी श्रीमान्श्रीमतीको सम्बन्ध हो । हामी परस्परमा झगडा गर्ने, छोडपत्र, पारपाचुके गर्ने वा सम्पत्तिलगायतका विषयमा बारम्बार महाभारत मच्चाउने ग¥यौँ भने हाम्रा बाबुनानी अत्यन्त दुःखी हुन्छन् । बाबुआमा मिल्दा वा परस्परमा प्रसन्न रहँदा बालबालिकाले सारा खुसी पाएको अनुभूति गर्दछन् । उनीहरुले बारम्बार हेर्ने र सिक्ने भनेकै बुबाआमाबाट हो ।
हामीबीचको झगडा भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, दर र मात्सर्यका कारण हुने हो । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, अनावश्यक कामवासनाको प्रभावमा परेर घरबाहिर सम्बन्ध विकासतिर लाग्ने, एकअर्कासित गुपचुप रहने, खुलेर कुरा नगर्ने, परस्परमा सेयरिङ नहुनेजस्ता कारणले श्रीमान्श्रीमतीबीच झगडा हुने गर्दछ ।
वैवाहिक जीवन शतप्रतिशत शुद्ध र हामीले चाहेजस्तो कहिल्यै हुँदैन, बनाउने हो । आफ्नै मनका बीचमा पनि कति कुरा मिल्दैनन्, तर विवेकलाई साक्षी राखेर त्यसैले देखाएको बाटोमा हिँड्नु हाम्रो दायित्व हो । श्रीमान्का कुरा आधा, श्रीमतीका कुरा आधा मिलाएर घरपरिवारको नीतिनिर्धारण गर्नुपर्दछ । जीवनमा कति कुरा कम्प्रोमाइज गर्न पनि जान्नुपर्दछ । दूधले नुहाएजस्तो वा सोह्रै आना सुन्दर, सबै रुपलावण्यले धपक्क बलेको सयमा सय विचार मिल्ने श्रीमान् अथवा श्रीमती पाउनु भनेको वा त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध हुनु भनेको निकै अप्ठ्यारो कुरा हो । त्यस्तो प्रकारको सम्बन्धको खोजी गर्नु भनेको बालुवामा तेल खोज्नुसरह हो । हामीले नभएको सम्बन्धको व्यर्थ कल्पना गर्नुभन्दा भएको सम्बन्धलाई सुस्वादु, सुन्दर र सार्थक बनाउनतिर लाग्नुपर्दछ । यसले नै पारिवारिक शक्ति र सौन्दर्यको श्रीवृद्धि गर्दछ ।
आजभोलि प्रायः बाबुआमा र छोराछोरीको भविष्यप्रति भन्दा पनि आफ्नो सजिलोप्रति आकर्षित भएका देखिन्छन् । ‘छोराछोरीका लागि आफ्नो खुसी, मस्ती र स्वतन्त्रता मारेर कहाँ हुन्छ ? पहिला आफू र बल्ल परिवार अनि छोराछोरी’ भन्ने धारणा अभिभावकमा हुर्किएर गएको छ । यसको मारमा हाम्रा साना र कलिला छोराछोरी परेका छन् । यो उनीहरुप्रतिको घोर अन्याय र अपराध हो । निर्भय, निद्र्वन्द्व बाँच्न पाउनु, तनावमुक्त हुन पाउनु तिनको अधिकार पनि हो । तर, बाबुआमाको सम्बन्धका कारण ती कलिला बाबुनानी कम उमेरमै तनावको सिकार भएर बाँच्नुपर्दा के होला ? हामी कल्पनासम्म गर्न सक्छौँ । तसर्थ, आफ्ना बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद हुँदा, बारम्बार झगडा हुँदा वा विमति भइरहने कुराले सानासाना बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्ने असर र तनाव अत्यन्त पीडाजनक हुने भएकाले हामी सबै अभिभावक त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर सचेत हुनु आवश्यक छ ।
३. सधैँ हिजोका कुरा ?
बालबालिका आफ्ना अभिभावक गतिशील होऊन् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुले पढ्ने किताब पनि नयाँ छन्, साथीहरु नयाँ छन्, देशकाल परिवेश सबै नयाँ छ, तर घरमा बाबा र आमाले गर्ने कुरा भने पुरानै छन् भने पनि बालबालिका अलमलमा हुन्छन् । हिजोका कुरा आज गरेर हुँदैन । ‘हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो’ भनेर हुँदैन । हाम्रा हजुरबुबाको पालामा एक रूपैयाँ मानो घिउ पाइन्थ्यो, हाम्रो पालामा १ सय रूपैयाँ भयो तर हाम्रा छोराछोरीका समयमा एक हजार पुगेको छ । हिजोका कुरा गर्दा उनीहरु आश्चर्यमा पर्नुबाहेक केही गर्न सक्दैनन् ।
हाम्रा बाबुनानीलाई हामीले हिजोका कुरा सुनाउन सक्छौँ, तर सिकाउन बाध्य पार्न सक्दैनौँ । हिजो हामीले गरेका दुःख, अप्ठ्यारा, सङ्घर्षका कुरा कहिलेकाहीँ फुर्सदका बेलामा सुनाउनु पनि पर्दछ, त्यसलाई सुनेर तिनले कहिलेकाहीँ शिक्षा लिन पनि सक्छन्, तर जबर्जस्ती ‘मैले हिजो गरेजस्तै गर्नुपर्दछ, दुःख पाउनैपर्छ’ भनेर हुँदैन । यसले उनीहरुमा तनाव सिर्जना हुन जान्छ, जसका कारण तिनको सहज विकास र प्रगति पनि अवरूद्ध हुन पुग्छ । एकातिरको धार नयाँ र परिवर्तित छ, अर्कोतिर अत्यन्त पुरातन र प्रयोगहीन धार छ । यी दुईका बीचको सन्तुलनमा अवरोध सिर्जना हुँदा बालबालिकामा तनाव सिर्जना हुन पुग्ने हो । यस्तो बेलामा सचेत भएर हरेक अभिभावकले छोराछोरीको समय र आफ्नो समयका बीचमा सन्तुलन कायम राख्ने कोसिस गर्नुपर्दछ ।
४. आर्थिक अवस्था र जिम्मेवारी
घरमा अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, व्यवहार लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ भने पनि बालबालिका प्रसन्न हुन सक्दैनन् । बाबुआमाले कुनै व्यक्तिसित ऋण लिएका रहेछन् र ऋण दिने व्यक्ति घरमै आएर आफ्नाअगाडि बाबुआमालाई गालीबेइज्जती गरेको छ भने छोराछोरीलाई मर्नुजस्तै हुन्छ । उनीहरुले त्यो बेइज्जती बाबुआमाको नभएर आफ्नो हो भन्ने ठान्दछन् ।
पढ्ने बेलामा पनि घरकै याद आउँछ, ऋणकै याद आउँछ र साहूले गाली गरेको कुराले कोपर्छ । यति भएपछि न पढाइ राम्रो हुन्छ, न मानसिक शान्ति नै । बालबालिकालाई हरेक अभिभावकले आर्थिकरुपले हामी सबल छौँ, आवश्यक खर्चको कुनै समस्या छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्दछ । यसको अर्थ ‘हामी अत्यन्त धनी छौँ, जति पनि खर्च गर्न सक्छौँ’ भन्ने तरिकाले भन्दा पनि ‘जीवनमा आवश्यक पैसा, सम्पत्ति छ, तिर्नै नसक्ने ऋण छैन, तिमीलाई पढाइलेखाइका लागि चाहिने खर्च उपलब्ध हुन्छ’ भन्ने विश्वास हामीले छोराछोरीमा उत्पन्न गराउनै पर्दछ ।
त्यसका लागि अभिभावकले मिहिनेत गर्नुप¥यो, श्रम गर्नुप¥यो र वैधानिक आर्जनतिर जोड दिनुप¥यो । विद्यालयमा शिक्षक र व्यवस्थापनका मानिसले ‘तिम्रा बाबुआमाले पैसा तिर्दैनन्, ८÷९ महिनाको पैसा तिर्न बाँकी छ, छिटो तिर्न भन’ भनेर खबर पठाउँदा बालबालिकाको मन कस्तो होला ? यस्तो हुन भएन । बालबालिकाले ‘मेरा बाबुआमाले आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो पढाइलेखाइ, खानपिन, लवाइखवाइका लागि कुनै पनि प्रकारको समस्या झेल्नुपर्दैन’ भन्ने आत्मविश्वास बोकेको हुनुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरुले आफ्ना अभिभावकले कुनै न कुनै काम गरेको देख्नुपर्दछ । जागिर, व्यवसाय, अन्य श्रम, पेसा केही पनि छैन, तर ‘तिमीलाई म सबै पु¥याउँछु’ भनेर अभिभावकले भन्दा बालबालिकाले नपत्याउन सक्छन् । तसर्थ, अभिभावक यस विषयमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बालबालिका आफ्ना अभिभावक सधैँ सकारात्मक भएको मन पराउँछन् । उनीहरुले श्रम गर्छन्, मिहिनेत गर्दछन्, पढ्छन्, लेख्छन्, तर परीक्षा दिएर रिजल्ट आउँदा आशा गरेको अङ्क नआएको बेलामा पनि अभिभावकले ‘आत्तिनुपर्दैन, तिमीले पढेकै हौ । अर्कोपटक मिहिनेत गर्नू, योभन्दा राम्रो भइहाल्छ नि !’ भनेर सम्झाउँदा निकै खुसी हुन्छन् ।
विद्यालय परिवार, साथीभाइ, छिमेकी, बाबुआमा, परिणाम, पढाइलेखाइप्रति सधैँ सकारात्मक भएर सोच्ने र प्रेरित गर्ने अभिभावक पाउँदा बालबालिकाको मनोबल पनि त्यसै बढेर जान्छ । होइन, जति बेला पनि नकारात्मकमात्रै हुने, हरेक कुरामा किचकिच गर्ने, राम्रो अङ्क आउँदा पनि ‘अर्काको चोरेर ल्याएको होला’ भन्ने अभिभावकका कारण बालबालिकाले ठूलो तनाव महसुस गर्ने गर्दछन् ।
कहिलेकाहीँ छोराछोरी खेल्छन्, कहिलेकाहीँ साथीभाइसित घुम्छन्, रमाउँछन्, कहिलेकाहीँ नयाँ कुनै काममा रूचि देखाउँछन्, प्रत्येकपटक अनुहार बिगारेर नकारात्मकरुपमा अभिभावक प्रस्तुत हुँदा बालबालिकाको भएको उत्साह पनि मरेर जान्छ । अर्कोपटक कुनै जोस, जाँगर र उत्साह आउँदा पनि ‘बाबाआमाले’ हुन्न भन्नुहुन्छ अथवा बेठीक भन्नुहुन्छ, भैगो, नगरौँ !’ भन्ने विचार आउँछ र केही गर्नै मन नलाग्ने बन्न पुग्छन् । त्यसैले, सधैँ सकारात्मक र उज्यालो भएर बालबालिकालाई उज्यालो भविष्यतिर प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
६. अति मह¤वाकाङ्क्षा
सबै बालबालिकाले आफूले सकेको गर्ने हो । क्षमता जति छ उति नै तिनका लागि उपयुक्त हुन्छ । कहिल्यै पनि हामीले अनावश्यक सपना देख्ने र पूरा गर्न गाह्रा हुने मह¤वाकाङ्क्षा उनीहरुभित्र थोपर्ने काम गर्न हुँदैन । एउटा बालकले जति आफ्नो सोचले काम गर्दछ, त्योभन्दा धेरै अभिभावकको विचारअनुसार काम गर्दछ । त्यसैले, उसले हरेक प्रयासमा अभिभावकको राय लिन खोज्छ, अभिभावकको मनोभावना र आशाअपेक्षा जान्न खोज्छ । त्यतिबेला हृदयभित्र एउटा कुनामा उसले सोचिरहेको हुन्छ : ‘मेरा अभिभावकले मेरो शरीर, शौर्य र सामथ्र्यले सम्भव हुने, मेरो रूचि पनि मिल्ने र आनन्दसित सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाका कुरा गरे हुन्थ्यो, त्यस्तै सपना देखे हुन्थ्यो ।’
त्यस्तो बेलामा अभिभावकले अनावश्यक मह¤वाकाङ्क्षाका कुरा गर्न हुँदैन । अभिभावकका कारण धेरै छोराछोरी तनावमा आएका मात्रै छैनन्, आत्मदाहसमेत गरेका छन् । बाबुआमाले सधैँ आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको कुरामात्रै गर्न हुँदैन । हामी ‘मेरो छोरो डाक्टर छ, इन्जिनियर छ, यस्तो छ, उस्तो छ’ भनेर फुर्ति लगाउन मन पराउँछौँ । छिमेकीका अगाडि आफू ठूलो हुनुछ । यत्ति कामका लागि छोराछोरीले रूचि भए पनि नभए पनि डाक्टर, इन्जिनियर पढ्नुपर्ने ? आफ्नो मनको रूचि र चाहनालाई एकातिर पन्छाएर बाबुआमाको मह¤वाकाङ्क्षाका लागि पढ्नुपर्ने वा कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा कति छोराछोरी ठूलो तनावमा परेका छन् । यसका कारण उनीहरुको खुसी खोसिएको छ । तनाव त छँदै छ, जीवन नै नरहने अवस्था पनि सिर्जित हुँदै छ ।
७. दोषमात्रै देख्ने अभिभावक
हाम्रा बालबालिकाले सधैँ नराम्रोमात्रै गर्छन् भन्ने हाम्रो सारै पुरानो सोच हो । हेर्दा निकै भलादमी छ । कुनै विद्यालयको प्राचार्य वा कार्यालयको हाकिमजस्तो देखिन्छ, तर साना बालबालिकालाई देख्यो भने तँतँ र मम भनेर व्यवहार गर्दछ भने त्यसले बालबालिकालाई खै कहाँ बुझ्न सक्यो र ? बालबालिकाले जहिले पनि गल्ती नै गर्छन् भन्ने छैन नि ! हो, अवश्य पनि ती चञ्चल छन्, चकचक छन्, तर त्यो तिनको गल्ती होइन । हामी पनि त तिनको उमेरबाट गुज्रिएर आएका छौँ । हामीले बुझ्नु जरूरी छ ।
यता फर्कंदा पनि सुख छैन, उता फर्कंदा पनि सुख छैन । जतिबेला पनि ‘यो भएन र त्यो भएन’ भनेरमात्रै भनिरहने कहिल्यै प्रशंसा नगर्ने अभिभावकका कारण बालबालिका सारै तनावमा पर्ने गर्दछन् । उनीहरुका धेरै अवगुण रहेछन् भने पनि केही न केही सद्गुण त अवश्य पनि हुन्छन् नि ! असल अभिभावक कहिल्यै पनि दोषतिर लाग्दैन, गुणतिर लाग्छ । हामीले हाम्रा बालबालिकाका राम्रा–राम्रा गुण खोजेर प्रशंसा गरिदिने गर्दा ती पनि उत्साहित हुन्छन्, तनावमुक्त हुन्छन्, निर्धक्क जीवनको गोरेटोमा अघि बढ्न सक्छन् । त्यसैले, सधैँ सद्गुण दर्शन गर्ने अत्यन्त गुणवान् बन्ने प्रयास गरौँ र सन्तानलाई पनि गुणवान् बनाऔँ ।
८. कठोर आदेश
बालबालिका कोमल हुन्छन् र कोमलता चाहन्छन् । कोमलता चाहनुको अर्थ सबैबाट नरम व्यवहार होस् भन्ने तिनको चाहना हुन्छ । अझ ‘मलाई अलिकति माया गरियोस्, मूल्य दिइयोस् र प्रेमले काम गराइयोस’् भन्ने चाहेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जहिले पनि कठोर आदेश दिने गर्दा ती आत्तिन्छन् ।
यस्ता आदेश ठूला भनाउँदा अरु मानिसले पनि दिन्छन्, तर घरमा बाबा अथवा आमाले दिँदा तिनलाई दुःख किन लाग्छ भने उहाँहरुका कुरा काट्न अर्थात् नाइँ भन्न सारै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले । छोराछोरीले भनेको मानेनन् अथवा मलाई टेरेनन् भनेर बाबाआमाले भन्नुहुन्छ कि भन्ने पीर छोराछोरीमा हुन्छ । तसर्थ, ‘कठोरतासाथ बाबाले अथवा आमाले, यसो गर्, उसो गर्, गर्नैपर्छ’ जस्ता आदेश दिँदा तिनले तनावको महसुस गर्दछन् । यसर्थ, हामीले कठोर आदेश दिने अथवा अधिकारीले जस्तो हुकुम चलाउने शैलीमा परिवर्तन गरी सप्रेम सम्झाएर कामप्रति प्रेरित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
९. आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्ने
बाबुआमाले गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने त कतै पनि हुँदैन । मान्छे मात्रले गल्तीबाटै सिक्ने हो । तर, हामी आम अभिभावकले बालबालिकाको अगाडि सकेसम्म आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ । यो हाम्रो अभिमान हो । यति सानोका अगाडि किन गल्ती गरेँ भन्नुप¥यो र ? भन्ने गुप्त मनोभावले हामीभित्र घर गरेको हुन्छ ।
तिनै अभिभावकले यो गल्ती हो, यसो गर्नुहुँदैन भनेर सिकाए, तर तिनले नै सोही गल्ती दोहो¥याउँदा गल्ती भएको स्वीकार्दैनन्, यस्तो अवस्था छ । ‘यस्ता बालबालिकासित कुरा गर्न हुँदैन, यीसित नजिकिन हुँदैन, यिनीहरुसित धेरै कुरा गर्न हुँदैन, यी सानै छन्, कुरा बुझ्दैनन्’ भन्ने सोचाइका कारण स्वयम् बालबालिका पनि विरोधाभासका सिकार बन्न बाध्य छन् । यसले उनीहरुमा गहिरो तनाव सिर्जना हुने गर्दछ ।
महान् त के हुन्छ भने चाहे व्यक्ति सानो होस् वा ठूलो होस्, आफ्नो गल्तीलाई बालबालिकाकै अगाडि स्वीकार गर्ने गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा सानो भइँदैन, बरू अझ माथि उठिन्छ, आफ्नै छोराछोरीलाई तनावमुक्त बनाएर, आफ्नै छोराछोरीको सम्मान पाएर ।
१०. हरेक व्यक्ति फरक छ, दिव्य छ भन्ने सत्य बिर्संदा
अभिभावकले हरेक व्यक्तिका फरक–फरक विशेषता हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । त्यसबाहेक प्रत्येक व्यक्ति दिव्य र ईश्वरीय छ भन्ने पनि ठान्नुपर्दछ । बालबालिका त झन् साक्षात् ईश्वरका प्रतिरुप हुन् । यो कुरा बुझन् नसक्दा नै हामीले बालबालिकालाई व्यर्थ अरुसित तुलना गर्ने गरेका छौँ, अनावश्यक हेलाँ र घृणा गर्ने गरेका छौँ ।
दाजुसित भाइको स्वभाव मिल्दैन, बहिनीसित दिदीको चरित्र मिल्दैन । दुवै उत्तिकै सक्षम र योग्य हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन । हो, दुवै योग्य नै भए पनि एउटै क्षेत्रमा नभएर फरक–फरक क्षेत्रमा हुन सक्छन् । यस्तो किन हुन्छ भने हरेक व्यक्तिले अरुको भन्दा फरक योग्यता र सक्षमता बोकेर आएको हुन्छ ।
हाम्रा बाबुनानीभित्र ईश्वरको दर्शन गर्न सक्यौँ भने हामीबाट हुने हिंसा, गाली र दुःखबाट हाम्रा छोराछोरी कहिल्यै प्रताडित हुनुपर्दैन ।
यसप्रकार, हामीले हाम्रा बालबालिकालाई दिने अनावश्यक तनाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु जरूरी छ । अलिअलि डर र गल्ती गरेपछि सजाय पाउनुपर्छ भन्नेसम्मको श्रद्धा हरेक छोराछोरीले अभिभावकप्रति राख्नुपर्दछ र त्यतिसम्मको अपेक्षा अभिभावकबाट हुनु अन्यथा पनि हुँदैन । माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न बहानामा छोराछोरीले अभिभावकका कारण अनावश्यक तनाव भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै अभिभावक यथाशीघ्र लाग्नुुपर्ने देखिन्छ ।